Umaka: ukubika kokuthengisa | Martech Zone
Umaka: ukubika kokuthengisa
Ukusebenza kokuthengisa kubalulekile kunoma yiliphi ibhizinisi elikhulayo. Ngethimba lokuthengisa elihilelekile, bazizwa benogqozi futhi bexhumeke ezinhlosweni nasezinhlosweni zenhlangano. Umthelela omubi wabasebenzi abahlukanisiwe enhlanganweni ungaba mkhulu - njengokukhiqiza okungenamsoco, nokuchitha ithalente nezinsizakusebenza. Uma kukhulunywa ngethimba lokuthengisa ikakhulukazi, ukuntuleka kokubandakanya kungabiza amabhizinisi imali eqondile. Amabhizinisi kumele athole izindlela zokubandakanya amaqembu okuthengisa, noma ingozi
Akekho ongaphikisa ukuthi i-LinkedIn iyinkundla ephelele yokuxhumana nabantu esezingeni elifanele kakhulu emhlabeni. Eqinisweni, angizange ngibheke i-resume enamathiselwe yalowo ozongenela ukhetho noma ngivuselele i-resume yami eminyakeni eyishumi selokhu ngasebenzisa i-LinkedIn. I-LinkedIn ayigcini nje ngokungivumela ukuthi ngibone konke okwenziwa kabusha, kepha futhi ngingacwaninga inethiwekhi yalowo ozobhapathizwa futhi ngibone ukuthi basebenze nobani futhi - bese ngixhumana nalabo bantu ukuthola
NgoLwesithathu, Agasti 19, 2015 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 Douglas Karr
I-RelateIQ iyi-CRM elula ehlangana nebhokisi lakho lokungenayo le-imeyili ukugaya ngokuzenzakalela nokuhlela idatha kusuka kumthombo ngamunye wedatha. I-RelateIQ ivumelanisa ngokuzenzakalela idatha kusuka kuma-imeyili wakho angenayo naphumayo, ikhalenda, nezingcingo ze-smartphone (noma ngabe uhlelo lokusebenza lweselula) ukuqeda ukufakwa kwedatha ngesandla kwi-CRM. Kuthuthuke kakhulu ukuthi uma othile akuthumelela i-imeyili futhi ungaphenduli, bazokwenzela isikhumbuzi ngokuzenzakalela. I-RelateIQ iqeda ukufakwa kwedatha ngesandla ngokuthwebula ngokuzenzakalela